Dowlada Somalia oo la sheegay in ay geysay ciidamo dheeraad ah magaalada Dhuusa-Mareeb… – Hagaag.com
Dowlada Somalia oo la sheegay in ay geysay ciidamo dheeraad ah magaalada Dhuusa-Mareeb…
Posted on 26 Oktoobar 2019 by Admin in National // 0 Comments
Dowladda Soomaaliya ayaa lagu waramayaa in ciidamo dheeraad ah geysay degmada Dhuusa-Mareeb oo ay ka jiraan xiisado siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda.
Ciidamada cusub oo ka tirsan Kumaandooska Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in laga kala keenay magaalooyinka Muqdisho iyo Gaalkacyo iyaga oo ku biiraya ciidamo ay horay dowladdu u geysay degmada Dhuusa-Mareeb.
Wararka ayaa intaa ku daraya in saacadaha soo socda halkaa tagi doono wafdi uu horkacayo Ra’iisal Wasaare Xassan Cali Kheyre.
Khilaafka siyaasadeed ee ka taagan Dhuusa-Mareeb waxaa wehliyay dhaq dhaqaaqyo ciidan, iyadoo habeen ka hor ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya la sheegay in ay rasaas ku fureen guriga uu magaalada ka degan yahay madaxa Xukuumadda Galmudug, islamarkaana ah hoggaamiyaha Ahlu Sunna Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xassan.
Dadka qaar ayaa aaminsan in haddii ay sii socdaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo militari ee iska soo horjeeda isku badali karaan gacan ka hadal, ilaa iyo haddana Dowladda wax war ah kama aysan soo saarin xiisada Dhuuas-Mareeb.